Soo dejisan WinPcap 4.1.3 – Vessoft
Soo dejisan WinPcap
WinPcap – software ka gaystay xirmooyin shabakada ka hor helitaanka kaadhka shabakada. WinPcap leeday qalabka network, oo ay ku jiraan analyzers maamuuska, kormeerayaasha network, ogaanshaha galidda network, matoorrada gaadiidka, qalabka baarista network iwm software ayaa qabata shaandhaynta baakadda heerka ugu of yaruna, waxaa ku jira engine ah ee tirakoobka network iyo taageertaa baakadda fog qabsadaan. WinPcap ku jira darawallada u reading baakidhka, in timaadid kaarka network iyo maktabadda heerka hoose si ay ula falgalaan wadayaasha network.
Dhagaysigu baakidhka network
Qabashada baakadda Remote
Comments on WinPcap:
WinPcap Software la xiriira:
العربية, English, Français, Español... Freegate 7.59
Helitaanka Remote Qalabka ayaa u helaan fog fog si computer ama server iyada oo internet-ka. Software ayaa awood u tahay in la xakameeyo jiirka ama keyboard iyo maareeyo xogta ee computer ka fog.
Internet Horumarinta Aalad awood leh in ay dib u soo ceshano xogta internet ka. Software The kuu ogolaanayaa inaad si ay u soo bixi qaybo ama bogagga internetka oo dhan iyo kuwa u aragto degdeg korodhka.
Internet Software inay la shaqeeyaan dekedaha Moodeemka iyo routere. Software wuxuu taageeraa tiro badan oo lagu daydo kala duwan ee qalabka network.
العربية, English, Українська, Français... RoboForm 7.9.22.2
العربية, English, Українська, Français... BartVPN 1.2.2
Programka sirta Internet Agabka in ay hubiso ilaalinta lagu kalsoonaan karo oo la xiriira internet-ka. Software ayaa awood u ah in la doorto server u jeclaystay khasaaraha yar ee xawaaraha internet-ka.
Avant Browser 2016 build 7 Standard iyo Ultimate
Kadib browser Soonkii la set badan oo ah fursadaha. software The kuu ogolaanayaa inaad si loo joojiyo xayaysiinta, pop-ups iyo in ay tirtirto faylasha ku meel gaar ah.
العربية, English, Українська, Français... 4shared Desktop 4.0.14
Files Software in la soo dejisan iyo faylasha geliyaan si ay adeeg file-qaybsiga. Sidoo kale codsiga awood u siineysaa inay si fudud u maareeyaan files of kaydinta daruurtii.
العربية, English, Français, Español... Fotosizer 2.09.0.548